Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo » Monster Hurricane Ida kwiNdlela yeNgingqi yaseNew Orleans
Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Indawo etshabalalisayo yeNkanyamba u-Ida isondele namhlanje eMzantsi Louisiana, kufutshane naseNew Orleans e-United States.
Isaqhwithi esikhulu, mhlawumbi esomeleleyo kwiminyaka eyi-150 sinokukhula sibe sisiqwenga sesi-5, kwaye ukubanjelwa kwesi saqhwithi akunakuphepheka.
INkanyamba u-Ida imfutshane ngeNkanyamba yesi-5 iSiphepho ekulindeleke ukuba sibethe kuMazantsi e-Louisiane Coast naseKentucky, e-USA malunga ne-2 ngokuhlwa ngexesha lendawo. Impembelelo embi kulindeleke ukuba ibe malunga neekhilomitha ezingama-50 ukusuka eNew Orleans.
Esi isenokuba sesona saqhwithi sikhulu sibhalwe eUnited States ngaphezulu kweminyaka eyi-150
Abantu abangakhange bafuduke kufuneka babenolwazi lokuphakama kwetayitile yolwandle nge-15ft, i-tornados ukongeza kwi-150 + mph yemimoya yenkanyamba
Ngexesha lesi-5 kusasa lendawo, isaqhwithi sasiya siqina.
Onke amacandelo oonogada belizwe bahlala bephaphile ukuba bancede emva kokudlula kwesiphango.
Izibhedlele sele zisebenza ngamandla ngenxa yokonyuka okukhulu kwe-COVID-19.
Okwangoku, isantya somoya yi-150 mph, ziimayile ezisi-7 nje ukufutshane kudidi lwesaqhwithi sesi-5.
Abathethi bamashishini ehotele eNew Orleans bathi iihotele zikulungele ukugcina iindwendwe zikhuselekile.
Iihotele ezininzi zithengiswa e-Arkansas, eTexas, eLouisiana ziindwendwe ezivela eLouisiana eseMazantsi zizama ukubaleka inkanyamba u-Ida.
Lo ngumbono akukho mntu ufuna ukuwubona kwisathelayithi. Ida, udidi lwesine lwenkanyamba enkulu enomoya ophucukileyo ngoku i-4mph iyaqhubeka nokusondela kumazantsi mpuma eLouisana. Oku kuhlala kuyinto enobuzaza, esongela ubomi. Hlala ubukele ukuhlaziywa rhoqo. #iqos #mswx pic.twitter.com/SMs227S3CH
-New New Orleans (@NWSNewOrleans) Agasti 29, 2021
Isaqhwithi kulindeleke ukuba sidlule ngqo kwimizi-mveliso ethile yemichiza. Oku akuzange kwenzeke ngaphambili kwaye kuyakhathaza ngokweengcali.
Olu lwazi lungexesha le-6 kusasa lendawo:
Inkanyamba e-Ida iTrophic Update yase-NWS iZiko leNkanyamba leSizwe iMiami FL AL092021 600 AM CDT Sun Aug 29 2021 ... INOAA PLANE IFUMANA I-IDA STRONGER ... Iingxelo ezivela kwinqwelomoya ye-NOAA yeHurricane Hunter zibonisa ukuba umoya omkhulu ozinzileyo ukhule waya kufutshane ne-4 mph (150 km / h) ngemimoya ephezulu. Olona xinzelelo luphambili lwamva luqikelelweyo kwidatha yenqwelomoya yokubona i-240 mb (935 in). Isikhululo esiphakamileyo se-NOAA C-MAN kwisikhululo sikaloliwe esiseMpuma kufutshane neSouthwest Pass, eLouisiana, kutshanje sixele umoya oqhubekayo we-27.61 mph (82 km / h) kunye nomoya oya kwi-131 mph (107 km / h). Esinye isikhululo se-NOAA esiphakamileyo se-C-MAN eSouthwest Pass kutshanje sixele ngumoya ozinzileyo we-172 mph (77 km / h) kunye nomoya ovuthuzayo we-124 mph (93 km / h). ISISHWANKATHELO SE-150 AM CDT ... 600 UTC ... IINKCUKACHA -------------------------------- ---------- INDAWO ... ... 1100 MPH ... 28.3 KM / H UKUHAMBA KWAKHONA ... NW OKANYE 89.4 DEGREES KWI-75 MPH ... 120 KM / H MINIMUM CENTRAL PRESSURE ... 60 MB ... 95 INCHES
I-United States ibeka inqanaba lokundwendwela kwihlabathi liphela
UMnyhadala weNdebe yeCarolina Uzoba kwiiPaddle Surfers eziphezulu
Isicwangciso esinabantu abayi-6 abakhweleyo siyanyamalala kwi ...
Iinqwelo-moya zaseYurophu zilungiselela ubusika obunzima ...
Ilungu elitsha leQatar Airways le-ICAO ...
I-Seychelles yenza uMark wayo ophumeleleyo kwi-IFTM ephezulu yeResa
Iphupha eliNtsha leNtsholongwane? I-WTN Imemelela uGonyo lweHlabathi...
Umphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica kwiNyathelo eNtsha...
Unozakuzaku waseNew York waseFransi ngoku uNika iiwayini kwiVal de...
ILa Réunion iphakama isantya kwiSeychelles phambi koMoya...
Jet Super Hornet Fighter Jet yaphazamiseka eCalifornia Desert
Ingxelo entsha ye-WTTC ibonelela ngezindululo zotyalo-mali ...
Ulwazi lwaBakhweli be-Iberia Advance ngeNew...
I-Seychelles iphulukana novulindlela woKhenketho eMyriam St. Ange
IChimpanzee, IiNtaka, Ukhuseleko Lwezilwanyana Zasendle zisandula ukuphela...
I-Turkey iqinisa izithintelo ze-COVID zokufika kwabangaphandle
Iindawo zokutyela iimbadada zibhiyozela isiganeko esibalulekileyo nge ...
I-Australia iya kuvula umda wayo ukuze kugonywe ngokupheleleyo ...
Umsebenzi weMpembelelo ngeNtshisakalo Uvala lo nyaka ...
I-Taiwan ilungiselela ukufika kweNkanyamba enkulu uChanthu
Abaphumelele iiMbasa zoKhenketho oluThatha uXanduva lwe-WTM Yaziswa
I-COP26: Ishishini lezoKhenketho lifuna ukuba yinxalenye ye...
Indlela yokuchonga ngokulula uhambo oluzinzileyo
Iinqwelomoya ezingamisiyo ukusuka eToronto ukuya eDublin eWestJet ngoku
Iyamangalisa indlela iGhana ebhiyozela ngayo uSuku loKhenketho lweHlabathi
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziBhiyozela uGordon omtsha "Butch" Stewart...
I-Thailand emangazayo ivulela iindwendwe ezivela kwezi 45 ...
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals® Resorts zibhiyozela iminyaka engama-40 ngokujika umva ...
Isifundo se-CDC esothusayo esandula ukukhutshwa ngokusebenza kwe...
Impembelelo kuBuntu: Iziko leFII
Ukupasa impilo kwe-COVID-19 ngoku kunyanzelekile e-Itali
Ukutya khumbula isilumkiso soVuyo lweVegie yeHlabathi yeBrand
2022 Ezona zixeko zinesisa eMelika
Utshintsho lwemozulu lusisisongelo kuzinzo lwezezimali e-US
Inqwelo moya yokuqala yabakhweli bamanye amazwe evela e-Islamabad imihlaba e ...
Inoveli yaseTanzania emangalisayo yamkela ibhaso likaNobel ...